थाहा खबर: वैदेशिक लगानी पाँच वर्ष यताकै न्युन, कुन क्षेत्रमा कति लगानी?
वैदेशिक लगानी पाँच वर्ष यताकै न्युन, कुन क्षेत्रमा कति लगानी?
​उर्जा क्षेत्रमा लगानी शून्य, पर्यटनमा बढ्यो
काठमाडौं: आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालमा १६ अर्ब ८६ करोड ८६ लाख १० हजार रुपैयाँको वैदेशिक लगानी प्राप्त भएको छ। उद्योग विभागमा दर्ता भएका विभिन्न ३९५ वटा उद्योगका लागि करिब १७ अर्ब रुपैयाँको विदेशी लगानी नेपालमा आएको हो। यो रकम आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को भन्दा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ थोरै हो।
गत आर्थिक वर्षमा नेपाल भित्रिएको विदेशी लगानीमध्ये सबैभन्दा धेरै पर्यटन उद्योग छ भने त्यसपछि सेवा क्षेत्रमा रहेको छ। १५२ पर्यटन उद्योगको लागि ६ अर्ब ६५ करोड ९ लाख रुपैयाँको विदेशी लगानी नेपाल आएको उद्योग विभागको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै १५७ सेवा क्षेत्रका परियोजनामा ५ अर्ब ८३ करोड ८३ लाख ७० हजार, ५५ उत्पादनमुलक परियोजनामा ४ अर्ब १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्राप्त भएको उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ।
त्यस्तै २० कृषि परियोजनामा २८ करोड ४० लाख, दुई निर्माण परियोजनामा १ करोड ७० लाख, ८ सूचना प्रविधिमा आधारित परियोजनाको लागि ८ करोड ८७ लाख ४० हजार र २ खनिज उद्योगको लागि ४ करोड रुपैयाँको वैदेशिक लगानी प्राप्त भएको छ।
परियोजना बढे पुँजी बढेन
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को तुलनामा २०७३/७४ मा वैदेशिक लगानीका परियोजनाहरु ४७ वटा बढेका छन्। तर लगानी भने गत वर्षको तलुनामा न्युन छ।
गत वर्ष २० अर्ब ५४ करोड ३८ लाख ९० हजार रुपैयाँ लगानी आएकोमा यो वर्ष लगानी ३ अर्ब ६७ करोड ५३ लाख ८० हजार रुपैयाँ लगानी कम आएको हो। गत वर्षको तुलनामा वन तथा कृषि क्षेत्रमा ७ करोड ५५ लाख, निर्माण क्षेत्रमा ३० लाख, उत्पादनमूलक उद्योगमा १ अर्ब ८३ करोड ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँ वैदेशिक लगानी घटेको छ। त्यस्तै सेवा क्षेत्रमा २ अर्ब ७२ करोड ७८ लाख ४० हजार रुपैयाँ घटेको छ।
गत वर्ष उर्जा क्षेत्रमा ३ अर्ब ७२ करोड ६० लाख ३० हजार रुपैयाँ लगानी आएकोमा २०७३/७४ मा लगानी नै आएको छैन।
तर पर्यटन क्षेत्रमा भने उल्लेख्य लगानी बढेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा गत वर्षको तुलनामा २६ परियोजना र ४ अर्ब ५६ करोड १४ लाख रुपैयाँ लगानी बढेको छ। त्यस्तै २०७२/७३ मा लगानी नै नआएको खनिज क्षेत्रमा ४ करोड रपैयाँ वैदेशिक लगानी आएको छ।
पाँच वर्ष यताकै न्युन लगानी
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा दर्ता भएका उद्योग सहित उद्योग विभागमा दर्ता भएका वैदेशिक लगानीको परियोजना ४ हजार ६९ पुगेका छन्। यी परियोजनाको लागि कुल पुँजी ३ खर्ब ७५ अर्ब ५८ करोड ८६ लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको छ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा २ खर्ब ११ अर्ब ५१ करोड ११ लाख पचार हजार रुपैयाँ वैदेशिक लगानी आएको छ। सबै भन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७१/७२ र सबै भन्दा कम आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वैदेशिक लगानी आएको छ।
पाँच वर्षमा आएका वैदेशिक लगानीको तथ्याङ्क हेर्नुहोस्
दर्ता भएका उद्योग
कुल पुँजी रुपैयाँमा
१६ अर्ब ८६ करोड करोड ८५ लाख १० हजार
२० अर्ब ५४ करोड ३९ लाख ९० हजार
८१ अर्ब ३७ करोड ६ लाख
४० अर्ब ७३ करोड ७२ लाख ७० हजार
५१ अर्ब ९९ करोड ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ
राजश्‍व परामर्श समितिको प्रतिवेदन, आगामी आर्थिक वर्षको राजश्‍व ७५० अर्ब
काठमाडौं: राजश्‍व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्षको लागि राजश्‍वको विषयमा गरेको अध्ययन र सुझाव सहितको प्रतिवेदन आइतबार बुझाउने तय...
रवीन्द्र अधिकारीले थाहा पाएको तथ्य : 'मन्त्रीले काम नगर्ने हैन नसक्ने रहेछन्!'
काठमाडौं: अघिल्लो संसदमा रविन्द्र अधिकारी संसदीय सिमति विकास समितिका सभापति थिए। विकास समितिको सभापति भएको कारणले उनले सञ्चालनमा रहेका त...
सगरमाथा आरोहण सकियो, ३६ करोड १४ लाख रोयल्टी संकलन
सोलुखुम्बु : वसन्त ऋतुमा हुने सगरमाथा आरोहण सकिएको छ। शुक्रबार शुक्रबार अन्तिम समूह एकजना विदेशीसहित चार नेपालीले आरोहण गरेसँगै यस व...
११ सार्वजनिक संस्था अझै घाटामा, सरकारको लगानी ३ खर्ब १२ अर्ब पुग्यो
काठमाडौं: चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थामा सरकारको लगानी ३ खर्ब ४२ अर्ब रुपैया रहेको छ। ३७ संस्थानमा गरिएको यस्तो लगानीमध्ये ...
धेरै नाफा र घाटा व्यहोर्ने पाँच-पाँच संस्था, कमाउने दुईमा आयल निगम
काठमाडौं : लामो समयदेखि निरन्तर घाटामा रहेको नेपाल आयल निगम गत आर्थिक वर्षदेखि नाफामा जान थालेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ...